मन्त्रीमाथि बला, त्कार आ, रोप ! - Onlinenews Global
मन्त्रीमाथि बला, त्कार आ, रोप !
August 23, 2021 laxmiLeaveaComment on मन्त्रीमाथि बला, त्कार आ, रोप !
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीबाट महिलामाथि बला, त्कार भइरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। केही दिनअघि पी, डित महिला र उनका पति जिल्ला प्र, हरी कार्यालय, सुर्खेतमा बला, त्कारसम्बन्धी जा, हेरी दिन गएका थिए।
‘आफूमाथि बला, त्कार भएको भन्दै एक महिला र उनका पति प्र,हरी कार्यालयमा आउनुभएको थियो, भिडियो पनि देखाउनुभएको थियो,’ प्र,हरीका अनुस, न्धान अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूले भनेअनुसार मु, द्दा दर्ता गर्ने ह, दम्याद कटिसकेकाले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर आउन सुझाव दिएर पठाएका हौं।’***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
भिडियोमा पीडित भनिएकी महिला कोठाभित्रै देखिन्छिन्। बाहिरबाट ढोका ढक्ढकाएको आवाज सुनिन्छ। महिलाले ढोका खोल्छिन्। भित्र पसेर खाटमा बस्नेबित्तिकै मन्त्री शाहीले उनलाई अँगालोमा बेर्छन्। त्यसपछि महिला रोएको देखिन्छ। मन्त्री शाही महिलालाई सम्झाउन खोजिरहेको अवस्थामा देखिन्छन्।प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका पी, डितले उक्त भिडियो २०७६ माघतिरको भएको बताएका छन्। जति बेला शाही प्रदेश सांसदमात्रै थिए। प्रह, रीसम्म यो घटना ढिलो गरी पुग्नुमा पी, डितले तत्कालीन सांसद एवं हालका मन्त्री शाहीसँग ‘रकमको बार्गेनिङ’ गरेको अनुमान गरिएको छ। रकममा कुरा नमिलेपछि बल्ल प्र, हरीमा पुगेको आशंका छ।
प्रह, रीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरी आउन भनेका पी, डित महिलाका पति गत शुक्रबार मध्यरातमा भेरी पुलमा कु, टिएको घट, नाबाट प्र, हरी गम्भीर बनेको छ। पी, डित महिलाका अनुसार उनका पतिलाई मन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रेम बुढाले छलफलका लागि भन्दै राति ९ बजेतिर गाडीमा राखेर लगेका थिए। उनीहरू छिन्चु बजार पुगेर एक होटलमा मदि,रापानसहित छलफलमा जुटेका थिए। त्यहाँ लेनदेनको विषय नमिलेपछि उनीहरू वीरेन्द्रनगर फर्किएका थिए। वीरेन्द्रनगर फर्किनेक्रममा बुढा र मन्त्री शाहीका भाइले पी, डित महिलाका पतिलाई राति साढे १२ बजेतिर कु, टपिट गरेका थिए। प्रह, रीले साढे १ बजेतिर युवकको उ द्धार गरेको थियो।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
भोलिपल्ट पी डित युवकले घाउ जाँच केसका लागि ठा डो उजु, री दिए। ‘चार गते राति ९ बजेतिर मिटिङ छ भनेर मन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रेम बुढाले फोन गरेका थिए, त्यसपछि उहाँ जानुभएको हो,’ पीडित महिलाले भनिन्।उनले बला, त्कार घट, नाका बारेमा भने केही बताउन चाहिनन्। ‘सबै कुरा श्रीमान्लाई थाहा छ, पहिले श्रीमान्लाई खोज्न सहयोग गरिदिनुस्,’ उनले भनिन्, ‘हामी पी, डित छौं, न्याय पाउनुपर्छ।’उनले पति सम्पर्कविहीन भएदेखि आफूले खाना पनि नखाएको बताइन्। ‘मन्त्रीका स्वकीय सचिवले बोलाएर गएको, मध्यराति प्रह, रीले भेरी पुलबाट उ, द्धार गरेको थाहा छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि श्रीमान्को अ त्तोप त्तो छैन्।’ उनले पति फेला नपर्दासम्म बला, त्कारको विषयमा केही नबोल्ने बताइन्।
आफूलाई मन्त्री शाहीको प्रेस सल्लाहकार बताउने सचिवालयका कर्मचारी नन्दकृष्ण अधिकारीका अनुसार ती महिलाका पति यसअघि शाही सांसद हुँदा स्वकीय सचिव थिए। ‘मन्त्री भएपछि उहाँले सचिवालयबाट हटाउनुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि मात्रै यो घटना बाहिर आएको हो।’उनले थपे, ‘मन्त्रीज्यू यो घट, नालाई ग्रान्डडि जाइन भन्नुहुन्छ। मन्त्री भइसकेपछि सचिवालयबाट हटाएको झोकमा यस्तो आरोप लगाइएको हो।’ शाही गत वैशाखमा मन्त्री भएका हुन्।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****